Galgaduud: Reer Miyiga oo isa sii gaarsiinaya Wacyigalinta Coronavirus – SOMA: Somali Media Association
Galgaduud: Reer Miyiga oo isa sii gaarsiinaya Wacyigalinta Coronavirus
Dadka reer miyiga ah ee ku nool deeganada Galmudug oo aan maamul iyo dowlad midna ka helin tilaaboyinka looga hortago Cudurka Corona iyo wacyigalintiisaba ayaa bilaabay in ay isa sii gaarsiiyaan Wacyigalinta Cudurkan halista ah.
Abdirisaaq Maxamed Xaaji waxa uu ka mid yahay dadka reer miyiga ah ee aan fahamka ka haysan Covid-19, kana ka wacyi galiyaa dadka baadiyaha kula nool, wuxuu oga digaya khatartiisa astamaha lagu garto xanuunka, qofka qaba sida lagu ogaan karo iyo sida lagu kala qaado.
Waxa uu dagan yahay deegaanka Raamaale oo 23 Kiiloo Miter dhanka waqooyi kaga beegan Dagmada Guriceel ee Gobalka Galgaduud. Abdirisaaq wuxuu ii sheegay isagu inuu wacyi galinta xanuunkan uu ka helay degmada Guriceel mar uu yimid, ayuu ku arkay Baabuur ay ku xiran yihiin Sameecado, oo dadka looga digayey khatarta uu leeyahay Cudurkan.
Markii uu si wanaagsan u dhageystay kadib, ayuu go’aansaday in intii uu ka faa’iidey dib ugula laabto halkii uu ka yimid si halista Karoonaha looga badbaado.
“Markii an ogaaday dhibaayada xauunkan ayaan go’gaansaday inaan dadka miyiga igula nool oo aysan jirin cid ka wacyi galineysa inaan anigu waxa aan go’aansaday inta uu fahamkeygu yahay inaan gaarsiiyo madaama dadka miyigu iyaguna u baahan yihiin in laga wacyi galiyo dhibaatada xanuunkan Ayuu yiri Abdirisaaq.”
“Ma jirto cid si gaar ah aniga iisiisay wacyi galintiisa balse madaama an miyiga & guriceelba aan daganahay guriceel ayaan ka helay magaalada sida raadiyaha & wacyi galin gaari codbaahiye lagi xiray oo magaalada lagu wareejinayay sidaa ayaan ku helay xogta xanuunkan & sida looga hortagi karo. ayuu yiri Abdi rizaaaq”
Waxa uu Cabdirisaaq iyo laba qof oo kale oo ku wehelisa ayaa reer miyiga kale u sheega in Muhiim ay tahay kala Fogaanshaha, markastana gacmaha la dhaqdo, sidoo kalana Nadaafada lagu dadaalo.
Meelaha ay dadku isugu yimaadaan oo ay kamid tahay Ceelka, ayaa ugu badan goobaha ay ka sameeyaan Wacyigalinta corona.
“Wacyi galinta waxaan u isticmaalnaa Mokorofan Codka dheer waxaan tagnaa meelaha tuuloyinka ah ee reer miyigu ku kulmaan sido kale reeraha guryahooda & barkadaha loo soo arooro ayaan kula hadalnaa dadka ayuu yiri markale.”
Soomaaliya oo uu soo gaaray Cudurka Corona 16-kii Maarso ee sanadkaan, ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay dalka, iyadoo ay ku Wasiirada Caafimaadka dalka ay ku dhawaaqday tallaabooyinka looga hortagayo cudurkan.
Yaasiin Xasan Diirye oo ka mid ah dadka reer miyiga ah ayaa u sheegay Barnaamijka Wadaagga SOMA, in markii ugu horeysay uu maqlo Corovirus uu ka maqlay Cabdirizaaq & saaxibadiis oo Mikaroofan uga sheegaya dadka khatarta uu leeyahay cudurkaan.
Markii uu qaatay wacyigalinta dib ayuu u gaarsiiyey qoysiiska, & dadka deriska la ah si ay feejignaan uga galaan Covid-19.
Yaasiin waxa uu noo sheegay in hadda uu si fiican u fahmay waxyaabaha looga baahan yahay si uusan saameyn ugu yeelan Karoonaha. Wax uu tilmaamay in Naftooda ay halis weyn ku jirtay haddii kooxdan sida Mutadawacnimada ah uga wada Miyiga Galgaduud aysan ka wacyigalin lahayn.
Waxay intaa ku dartay in natiijada wacyigelinta darteed ay miyiga xaddideen isu-imaashaha oo qoysna uusan qoys kale u gelin. Waxa uu xusay in reer kasta uu ku dadaalo in aysan ka go’in saabuunta iyo biyaha si ay faraxalka u joogteeyaan, isagoo tilmaamay in dadka ay saabbuunta ka go’do ay isticmaalaan dambas.
“Waxaan ka bartay sida looga hortago qofka qaba waxa lagu garan karo sida lagu kala qaado calaamadaha uu leeyahay sida aan isga ilaalin karo cudurkan daran anigana markiiba waxaan sii gaarsiiyay qoyskeyga oo an la wadaagay wacyi galintii aan iyaga ka helay inta an ka awoodno madaama taloyink qaar aay nagu adag yihiin. Ayuu yari yaasiin.”
Marka laga yimaado in dadkaan reer Miyiga ah ay is gaarsiiyaan Wacyigalinta, waxaa jirta caqabad ka haysata dhaqangalinta wixii ay qaateen. Dadkaan ayaana heli Karin Agabyada looga hortago Karoona sida Maryaha Afka lagu xirto, & Jeermis dilaha.
Howshan ay isku xilsaareen kooxdaan reer Miyiga ah, ayaa ah mid nuuceeda oo kale, lagu arko deegaanada Soomaalida, gaar ahaan Gobolada Mudug & Galgaduud. Marka laga soo tago in Magaalooyinka lagu qabto Siminaaro dadka loogu sheegayo Halista Safmarka Karoona.
WQ: Abdiqadar Xasan Maxamed oo ka tirsan Radio Galgaduud.
Sidee looga gudbi karo Nidaamka awood qeybsiga beelaha ee 4.5?
Kahor doorashooyinka, waa muhiim badbaadinta xorriyadda warbaahinta Soomaaliya